khin oo may November 12, 2008 at 1:41 AM
12 Nov 08, 01:39
kom: ရှေ့ဆက် လက်တွဲ မြတ်နီုးချစ်ခင် သက်ရှည်ပါစေ သော်ဝ်
kom: Anniversary ထင်တယ် ဆုတောင်းသွားဦးမှ
Moe Cho Thinn November 12, 2008 at 2:23 AM
ဘယ်တော့မှ မသေဆုံးတဲ့ အချစ် နဲ့ ခိုင်မြဲသော ကြိုးလေး တိုးပြီး ချည်နှောင်နိုင်ပါစေ အမတို့ရေ..
ဇနိ November 12, 2008 at 3:01 AM
myatnoe November 12, 2008 at 7:27 AM
ထိုကြိုးကားသေး၏ သို့သော် ခိုင်မြဲ၏
ထိုကြိုးကို မမြင်နိုင် သို့သော် ကြိုး၏ဆွဲငင်အားသည် ပြင်းထန်၏ အဟီး ဒဿနတွေ အမလိုလုပ်ကြည့်တာ..
မင်္ဂလာရက်မြတ်မှသည်.. သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်းဖက်၍ ပျော်ရွှင်သော အနာဂတ်ပန်းဆိုင်ဆီ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
Yu Wa Yi November 12, 2008 at 7:20 PM
Wish you can possess FOREVER LOVE, sis. Good luck!
sonata-cantata November 12, 2008 at 8:42 PM
nu-san November 13, 2008 at 10:25 PM
ကဗျာလေးက လှလိုက်တာ.. အင်္ဂလိပ်စာပေမယ့် ဖတ်ရတာ ရိုးရှင်းပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်...
အောင်သာငယ် November 15, 2008 at 1:33 PM
thorn musem November 16, 2008 at 4:04 AM
အေးမြသော အချစ်တွေကို ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...။
တန်ခူး November 17, 2008 at 1:04 PM
သက်ဝေရေ… ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းဖွယ် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ လေး ဖြစ်ပါစေလို့ …
XXနှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာထောင်သောင်းတိုင် ချစ်ခြင်း ကြင်နာခြင်း အပြန်အလှန်ဖေးမနားလည်ခြင်း နွေးထွေးခြင်း များစွာနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ကြိုးလေး ပိုမိုခိုင်မြဲတည့်တံ့နိုင်ပါစေလို့ …
ခွန်မြလှိုင် November 18, 2008 at 12:39 AM
မမရေ.. အဓိပ္ပာယ် အနှစ်သာရ ရှိလှတဲ့ ကဗျာလေး အတိုင်း နှစ်ယောက် တဘ၀ တသက်လုံး ငြိမ်းချမ်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
pandora November 19, 2008 at 12:13 AM
လက်စွပ်လေးတွေလှတယ်။ ဒီဇိုင်းလေးတွေက ကြေး (ဂျီး) တော့ဝင်နိုင်တယ်။
သက်ဝေ November 19, 2008 at 5:35 PM
အထာလေးနဲ့မသိမသာလေး တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကောက်ချက်ချရင်း ဆုတောင်းပေးသွားကြသူများ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်...။
မမခင်ဦး... သိပ်တော်တာဘဲနော်.. ဒါကြောင့်လဲ သက်ဝေတို့ ရဲ့ချစ်မမ ဖြစ်နေတာပေါ့... ဟုတ်တယ်ဟုတ်...။
ချိုသင်း၊ကိုနိ မနိ၊ ယုဝရီ၊ နုစံ၊ ကိုအောင်သာငယ်၊ ကိုဆူး၊ တန်ခူး နဲ့လှိုင်ရေ... ဆုတောင်းတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော်...။
တောင်းပေးတဲ့ဆုတွေနဲ့အားလုံးပြည့်စုံပါရစေ...။
မြတ်နိုးလေး... ကျေးဇူး.. လွမ်းနေမယ်နော်...။ အချိန်ရတာနဲ့ပြန်လာခဲ့နော်...။
မသီတာ... နှစ်ပင်လိမ်ကြိုး ကဗျာလေးကို အမြဲတမ်း အမှတ်တရ သိမ်းထားပါ့မယ်နော်...။ ကျေးဇူးတွေ အကြီးကြီးတင်ပါတယ်...။
ပန်ပန်... ကြေး(ဂျေး) မ၀င်အောင် ခဏခဏ ဆေးပါတယ်... ရေချိုးတိုင်း ဆေးပါတယ်...ဟီဟိ...။